Canab for gobollada waqooyi: sharaxaad iyo dabeecadaha kala duwan ee Taiga
Maanta, waxaa jira noocyo badan oo canab ah oo si isku mid ah loogu habboon yahay isticmaalka cusub iyo winemaking. Si kastaba ha ahaatee, mid kasta oo ka mid ah waxay leedahay sifooyin kala duwan, marka ka hor inta abuuraya beero canab ah waa muhiim in la barto sharaxaadda faahfaahsan ee xulashada la doortay.
Calaamadaha muuqaalka iyo daaweynta caleemaha Alternaria
Fungus-dheere-dheecaanka Alternaria waxaa loo qaybiyaa noocyo badan. Laakiin maanta waxaan fiirin doonaa laba nooc oo gaar ah oo kicin kara jirro halis ah - alternarioz oo ku yaalla beerashada sabiibta ama xagaaga xagaaga. Tilmaamaha iyo Calaamadaha 10kii sano ee la soo dhaafay, Alternaria waxay kor u qaadday oo waxay noqotay mid u adkaysata saameynta dibedda.
Macnaheedu waa halganka cagaarshanka canabka ah ee canab
Beerta beerta caanka ah ee canabku waa mid xasaasi ah oo u nugul cudurada badan iyo cayayaan cayayaanka. Inta badan bannaanka u arkaan in buruqu waxay u muuqdeen on caleemaha canab, iyo la yaabi waxa aad ku samayn kiiskan. Waxaa macquul ah in warshadu ay ku dhufatay nooc ka mid ah cayayaanka.
Canab - mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee lagu beeray xagaaga xagaaga. Sannad kasta fasalada cusub iyo kuwa cusub, oo dheeraad ah iyo kuwo soo jiidasho leh ayaa la goosanayaa. Qaarkood waxay leeyihiin heer aad u sareeya oo caabiba cudurro iyo cayayaanka, qaarkoodna uma baahna daryeel qadarin ah, kuwa kale waxay leeyihiin dhadhan aan fiicneyn, ama si dhakhso ah u bislaaday.
Canab of fasalka American "Valiant"
"Valiant" - waa noocyo kala duwan oo loo isticmaalo samaynta casiirada tayada leh iyo lakabyada cas ee cas. Iyada oo ay sabab u tahay adkeysigeeda sare ee xaaladaha cimilada ee adag, kala duwanaanta noocaas ah waxay kasbatay caan ka weyn oo ku saabsan geedaha sabiibta ee waqooyiga. Waxaan kugu martiqaadaynaa inaad barato sharraxaadda noocyada kala duwan ee canab "Weli", ka wada hadal faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada, iyo sidoo kale barashada xeerarka beeritaanka iyo daryeellidda geedaha.
Canab Crimson: beeritaanka iyo daryeelka
Waxaa jira dhowr nooc oo sabiib ah oo hore, iyo xitaa yar canabka hore. Laakiin canabkee waa in la doortaa beerta qurxoon ee caadiga ah ee raba inuu abuuro geed canab ah oo soo saara dalagga dalagyada u bislaaday ka hor kuwa kale? Waxaan bixinnaa inaan si taxadar leh u eegno "Crimson" - canabki hore ee bislaaday. Qeexida "Crimson" - canab miisaan hore ah leh qurux iyo ballaadhan, berry aad u macaan, kaas oo leh iska caabin fiican ee fungi iyo dhaxan.
Kaalmeynta Mareykanka: Kala soocista sifooyinka miraha Century
Grapes "Century" ma ahayn waqti dheer ka hor caan ka ah CIS, laakiin horay u guulaysatay inay ku guuleystaan ​​jacaylka bannaanka u badan. Tixgeli sharaxaada kala duwan, ogow waxa uu u baahan yahay daryeel iyo kan uu helay caankiisa. Taariikhda xulashada canab, oo loo yaqaana "Century", waa natiijada iskudhaf adag oo laba nooc oo canab ah - "Gold" iyo "Q25-6".
Xeerarka loo adeegsado canabka ka hor hoyga: sida loo diyaariyo warshadda jiilaalka
Dhamaadka xilliga xagaaga waxaad u baahan tahay inaad daryeesho jiilaalka habboon ee dhirta, dhirta iyo dhirta. Fikrad gaar ah waa in la siiyaa canab, sababtoo ah waa warshad kuleyl ah oo u baahan daryeel gaar ah. Aan eegno sida si haboon loogu diyaariyo canabkiisa xilliga jiilaalka. Ka hor inta aadan ka shaqeynin (manjooyin dayrta) Ka dib markaad beertid caleemaha, caleenta ugu danbaysa way ka dhici doontaa canabkiinna - waxaad bilaabi kartaa manjooyin.
Tilmaamaha iyo sifooyinka kala duwan ee canabka oo muddo dheer sugaya
Canab - halkii dhib ah ee sii kordhaya geedka. Laakiin inkastoo tani ay qayb muhiim ah ka tahay dhismaha xagaaga kasta. Marka aad dooranayso noocyo kala duwan ee beerto, bannaanka waxaa lagu hagaa shuruudo badan. Qofku wuxuu jecel yahay aan qabyo ahayn, qofku wuxuu diiradda saaraa dhadhanka berry, qofna wuxuu doonayaa inuu helo goosashada hore.
Canab Rusbol - sharaxaad iyo astaamo kala duwan
Kalluunka sii kordhaya ayaa noqonaya mid sii caan ah labadaba gobollada koonfureed iyo xariiqda dhexe iyo waqooyiga. Sidee loo go'aamiyaa noocyada kala duwan ee ku habboon in ay sii kordhaan macno ahaan latitudes, keenaya goosashada wanaagsan. Sida laga soo xigtay talo ee beeralaydu, mid ka mid ah kuwaa oo kale ayaa loo tixgelin karaa gardarrada "Rusbol" (magaca labaad waa miraayad ramish ah).
Deggan oo aan qabyo ahayn: Caleemaha Miroob Miracle
"Miracle White" - waa canab cajiib ah oo cajiib ah. Berry wuxuu casiir ah u leeyahay dhadhan qurux badan. Maqaalka waxaan ku arki doonaa "miraha caddaanka" miraha - sharaxaadda sida loo abuuro iyo daryeelka, iyo sidoo kale macluumaad kale oo faa'iido leh oo sii kordhaya noocyada kala duwan ee beerta. Taariikhda noocyada kala duwan ee taranta ayaa waxaa lagu dhajiyay Machadka I.
Canab "Dawn Nesvetaya" - qaababka kala duwan
"Zarya Nesvetaya" waa caleemo casiir leh oo udub dhexaad ah oo dhadhan yar leh, oo ah dabeecad aan fiicneyn oo qiimo leh oo ka mid ah astaamaha. Qurxoon, caqli badan, oo leh walxo casaan ah oo casaan-madow ah ayaa ku guulaystay in ka badan hal beerta. Intaa waxaa dheer, kala duwan ayaa ku guuleystay meel gaar ah oo ka mid ah soo saarayaasha waaweyn. The berry ah ee warshadda waxay leedahay dhadhan aan caadi ahayn, taas oo gaar ahaan qiimo leh ee soo saarista miraha tayo sare leh.
Dhab ahaan ka soo jeeda Magarach: Caleemaha kala duwan ee cagaarka
Canab waa dhir aad u fiican, ku dhowaad dhammaan bannaanka u koraan. Noocyo kala duwan ayaa mararka qaar adkeynaya in la doorto. Haddii aad rabto in aad ku dabbaalatid berry hore ee macaan, ka dibna fiiro gaar ah u sabuun. Maqaalkeena waxaan ka hadli doonaa waxa ka soo baxa Grape Zest, sharaxaad ka bixi noocyada kala duwan. Taariikhda xulashada Kala duwan waxaa la helay iyada oo loo marayo shaqada shaqaalaha ee Machadka Grape Uk "Magarach".
Canab waxaa laga helaa beeraha guriga oo ku yaal meel kasta oo adduunka ah. Beereyaalku waxay isku dayayaan inay helaan, gooyaan, oo ay u kobcaan noocyada kala duwan ee canabka, kuwaas oo ku habboon dhamaantood. Oo waxaa jira noocyo dhowr ah oo ka mid ah warshadan cajiibka ah, thanks to tarbuunka iyo teknoolajiyada jira, dhammaantood way ka duwan yihiin midba midka kale.
Shaxda, farsamada, noocyada abuurka jilicsan ee canab kala xulashada Krasokhina
Aan qudh ah oo aan geedi lagu beeray ayaa u qalma sida dareenka sida canab, sababtoo ah dabiicigu wuxuu ku dhajiyay sifooyin gaar ah oo aan muuqan. In ka badan hal sano oo millennium ah, dhirtaas waxay u diyaargaroobeysaa bani-aadmiga. Intaa waxaa dheer, berry ah ee warshad this waxaa loo tixgeliyaa labadaba raashin iyo daawo, kaas oo si fiican loogu yaqaanay awoowayaasheenna fog.
Kala duwan xilliyo kala duwan oo canab ah Kishmish Zaporizhia
Canab waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin miraha miraha ugu horreeya ee lagu beeray beerta - berrigan waxaa ka badan 6000 sano. Breeders keeno noocyo kala duwan oo kala duwan, oo leh noocyo kala duwan oo xogta dibadda iyo dhadhan. In this article waxaan ka hadli doonaa mid yar yar, laakiin si guul leh koray noocyo - Kishmish Zaporozhye.
Tilmaanta, sawirada iyo sifooyinka kala duwan ee canabka "Romeo"
Sawirka canab "Romeo" waa mid aad u qurux badan. Rucubyadu waa kuwo caadi ah oo waaweyn, sida haddii la rinji. Iyo dhadhanka waa mid cajiib ah. Maqaalkeena waxaan tixgelineynaa sharaxaadda noocyo kala duwan, iyo sidoo kale astaamaha beeraha. Taariikhda la qabadsiinta Noocyada noocan oo kale ah waxaa ka soo jeeda geedka Ruush E. G. Pavlovsky. Wuxuu ka gudbay noocyo canab ah "Demeter" iyo "Nistru".
10 noocyo canab ah oo ugu wanaagsan oo leh sawirro iyo sharraxaad
Vines - dhirta kulul ee aadka u kulul ee ka jawaab celinaya cawska. Caleemaha sannadlaha ah ee ciriiriga ah ayaa si aan macquul ah u dhicin xitaa heerkulka hooseeya ee hooseeya. Canabkii hore iyo geed canab ah, oo si fiican u tufay, waxay ku noolaan karaan dhowr maalmood iyagoon wax waxyeello u geysaneynin iyo qaboobaha xooggan - laakiin walaacaas oo kale waa mid aan loo baahnayn.
Noocyo qabow oo u adkaysta qabow
Canab waa mid ka mid ah dalagyada ugu caansan, badan ee noocyo kala duwan kuwaas oo aan la tirin karin. Midkeen kastaaba wuxuu la kulmaa berri maalin kasta, maaddaama alaabtan ay si weyn uga muuqato nooc kasta oo cuntooyin ah, oo uu ku cuno raaxo. Iyo kuwa jecel oo canab ah waxay ku beeraan warshaddan xagaaga.
Cunto karis guriga dhexdiisa: la wadaago siraha
Raisin waa shey aad u caansan, sababtoo ah waxay leedahay sifooyin wanaagsan. Dadka degaanka xagaaga ee leh beerta beertooda ee ku yaala goobahooda waxay isku dayi karaan in ay diyaariyaan sabiibka guryaha loogu talagalay isticmaalka mustaqbalka, maaddaama ayan adagtahay in la fuliyo nidaamkan. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira habab badan oo kala duwan oo la goyn karo miraha la qalajiyey.